သောကတွေစုတယ် ဘယ်သူ့အပြစ်လဲ - Yangon Media Group
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်တား ဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေမူကြမ်းနှင့် ပြည့်တန်ဆာဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းများကို မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီ၏ ဦး ဆောင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲထားဆိုသောသတင်း ဖတ် ရတာ မင်္ဂလာရှိပါ၏။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရသည့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်များမှာ ခုနစ်ဦးလျှင် တစ်ဦးနှုန်းရှိကြောင်း သိရ၏။ ကျန်းမာရေး စစ်တမ်းကောက်ယူမှု(Demographic Health Survey-DHS)အရ သိရတာဖြစ်၏။
ယင်းစစ်တမ်းအရ အကြမ်းဖက်ခံရသူ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများက ခုနစ်ဦးလျှင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီး အမျိုး သမီးဦးရေ တစ်သိန်းတွင် ၂၈၂ ဦး အသက် ဆုံးရှုံးနေကြောင်းလည်း သတင်းများကို ဖတ် နေရပါ၏။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေထက်ဝက်ကျော် က အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပါသည်။ မြန်မာအမျိုး သမီးများအား အကြမ်းဖက်မှုကို ကြိုတင်ကာ ကွယ်ရေး၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ ပြန် လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းလျက် ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းများအရ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရသော အမျိုးသမီး နှင့်ကလေးများက သုံးဦးလျှင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြစ် ပွားလျက်ရှိပြီး ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းလည်း စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်ဆို သောသတင်းများကိုလည်း ဖတ်လိုက်ရ၏။
အမှန်အားဖြင့် ဖိုနှင့်မနေကြသော သတ္တ လောကကြီးတွင် ကာမဂုဏ်အာရုံဆိုသည် ဖြစ် ထွန်းနေမည်ကား မလွဲဧကန်၊ သို့သော် ဖြစ် ထွန်းလာသည့် စိတ်ဆင်ရိုင်းကို အသိဟူသော ချွန်းဖြင့် ထိန်းနိုင်လျှင်ဖြင့် မကောင်းပေဘူးလား။
အမျိုးသမီးများကို အနိုင်အထက်ပြုရာ တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများအဖြစ် ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ကန်ကျောက်ခြင်း၊ ထိုးကြိတ်ခြင်း၊ အခန်းတွင်း ပိတ်လှောင်ခြင်း၊ ငရဲမီး စသည် တို့ဖြင့် လောင်ကျွမ်းစေခြင်း၊ ဆေးဝါးများ ကုသ ခွင့်မရစေရန် အကြောက်တရားဖြင့် ထိန်းချုပ် ထားခြင်း၊ အစာရေစာ ပြည့်ဝအောင်မကျွေးဘဲ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း စသည်တို့ အမျိုးမျိုးရှိကြပါ ၏။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ အင်အားချင်းကမတူ၊ ဆူးပေါ်ဖက်ကျလည်း ဖက်ပေါက်မည်၊ ဖက်ပေါ်ဆူးကျလည်း ဖက် သာပေါက်မည်၊ မိန်းမသားတို့သည် ဖက်ပမာ ရှိကြလေ၏။
သို့သော် ယုန်ကမတိုး ပိုက်ကတိုးသည့် အဖြစ်များ ယနေ့ခေတ်တွင် ရှိနေကြသေး၏။ ဤသည်ကိုဖြင့် အချိန်ယူ၍ လမ်းမှန်အောင် လုပ်ကြရပေဦးမည်။ အချို့အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသမီးငယ်များသည် သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ် ထွာအတွက် အသွေးအသားကို ဈေးကစားနေ ကြရသေး၏။ ဤသည်က နိုင်ငံတော်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လည်း ပတ်သက်ကောင်း ပတ်သက်နေမည်ဖြစ်၏။ အချို့ ကာမဂုဏ်ထဲ ဇွတ်တိုးပျော်ဝင်ကြသူများလည်းရှိ၏။ ဤအမျိုး အစားတွင် လူကုံထံများ ပါဝင်၏။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ အိတ်ပေါက်ဖြင့် ဖားကောက်သည့်အဖြစ် တော့ဖြင့် မကြုံစေချင်သည်မှာ အမှန်ဖြစ်၏။
”ငါတို့တစ်တွေ ပြည့်တန်ဆာဘဝရောက် ခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ၊ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ခဲ့တာ အပြစ်လား၊ ကိုယ့်ဝမ်းနာကိုယ်ပဲသိတယ်။ ဗေဒင် ဆရာက ငါတို့ထက် ပိုမသိနိုင်ဘူး၊ အာဏာပိုင် လဲ ငါတို့ထက် ပိုမသိနိုင်ဘူး၊ ဝေသာလီပြည် ကောင်းစားစဉ်တုန်းကတောင် အမ္ဗပါလီဆိုတဲ့ အမျိုးမြတ်သမီးလေးဟာ ပြည့်တန်ဆာလုပ် ခဲ့သေးတာပဲ၊ တကယ်ဆို ငါတို့လိုပြည့်တန်ဆာ တွေရှိလို့ မုဒိမ်းမှုတွေနည်းတာ ကျေးဇူးတောင် တင်ရဦးမယ်”
”တစ်ခါက အကျဉ်းထောင်တစ်ခုထဲက အမျိုးသားထောင်မှာ အမျိုးသားချည်း စုဝေး ထားတယ်။ တို့နိုင်ငံတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား နိုင်ငံတစ်ခုမှာပါ။ လိင်စိတ်ဆိုတာ သက်ရှိပုထု ဇဉ်တွေရဲ့ သဘာဝပဲ။ နှိုးဆွလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မနှိုး ဆွလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အရာ၊ နင်တို့ ငါတို့ ပြည့်တန်ဆာလုပ်နေတာ တောင် လိင်စိတ်နဲ့ယှဉ်တဲ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့ သေးတာ နင်အသိ၊ ကဲထားပါတော့ ခုနက အကြောင်း ဆက်ပြောရရင် အမျိုးသားချည်းပဲ ဆိုတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိင်စိတ်ကို ဘယ်မှာ သွားအသုံးချမှာလဲ၊ ဒီတော့ ယောက်ျားအချင်း ချင်း အဓမ္မလိင်ဆက်ဆံတာတွေဖြစ်ကုန်ရော၊ ဒါကြောင့် လိင်စိတ်ဖြစ်လာရင် ဖြေဖျောက်တဲ့ ထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိဖို့ လိုတယ်။ ငါတို့က အဲဒီ လိင်ထွက်ပေါက်ရှာသူတွေအတွက် ပါရမီဖြည့် နေတာ၊ နင့်ကို ဗဟုသုတအဖြစ် ပြောပြတာ”
”အမေရိကန်နိုင်ငံ အင်ဒီးယားနားတက္ကသိုလ် က သုတေသီတွေရဲ့အဆိုအရ ပြည့်တန်ဆာ ခန်းတွေရှိလေလေ၊ မုဒိမ်းမှုတွေ ကျဆင်းလေ လေလို့ ဆိုထားတာ နင် ဖတ်ဖူးရဲ့လား”
သူလေးကဖြင့် ပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက် ဆိုပေမယ့် သတင်းစာတွေဖတ်၊ သတင်းတွေ နားထောင်တာ ဝါသနာပါသည် ထင်ပါ့။ ပြည့် တန်ဆာအလုပ်ကို လုပ်နေသော ကောင်မလေး တစ်သိုက်၏ ချစ်ခြင်းမဲ့အခန်းငယ်ထဲက စကား သံများကဖြင့် နာကျင်ခံခက်ရပါဘိ၊ သံဝေဂ နှင့် ဗဟုသုတရစရာများ ပါလာ၏။ ကျွန်တော် တွေးမိ၏၊ ဤကား လေ့လာထားသောအစိတ် အပိုင်းအချို့ဖြစ်လေ၏။
ယခုဆိုလျှင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးအပါအဝင် မြို့ကြီးအတော်များများတွင် မာဆတ်၊ အနှိပ် ခန်းများ၊ ကာရာအိုကေများ၊ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းများ ထွန်းကားနေကြသည်မှာ အားလုံး အသိ၊ လမ်းများပေါ်ရောက်ရှိဈေးခေါ်သော အဆင့်အထိဖြစ်နေကြပြီး ကားမှတ်တိုင်များ ရှေ့မှာ၊ ဟိုတယ်ကြီးများ၊ တည်းခိုခန်းများ၏ အနီးတစ်ဝိုက်လမ်းများမှာဖြစ်၏။ အဘယ် ကြောင့် ယခုလိုဖြစ်နေရပါသနည်း။ အပေး အယူများကြားတွင် မျောနေသည်လား၊ ပွင့် လင်းမြင်သာမှုများထဲ ပျော်ဝင်နေသည်လား၊ မစဉ်းစားတတ်တော့။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း များ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ထွန်းကားနေပါ၏။ ကမ္ဘာလှည့်များ ဝင်ရောက်မှုကလည်း မြင့်မား နေ၏။ ထိုအခါ နိုင်ငံပေါင်းစုံက လူမျိုးပေါင်းစုံ လာကြမည်။ ကမ္ဘာလှည့်များထဲတွင် စရိုက်စုံ ပါလာမည်။ အချို့က ဟိုတယ်ရောက်သည်နှင့် အမျိုးသမီးငယ်လေးများ ရှိ မရှိ၊ ရ မရ တောင်း ဆိုတတ်ကြ၏။ ပွင့်လင်းစွာပြောရရင် အထက် တန်းစားပြည့်တန်ဆာများကို အလိုရှိသည်ပေါ့။ ဤသည်အတွက်လည်း ဝိုင်းဝန်းထိန်းကျောင်း ရပေဦးမည်ဖြစ်၏။
အချို့ အရွယ်မရောက်သူ၊ အသက်မ ပြည့်သူများပင် ဤလောကထဲ ရောက်ရှိနေ ကြပြီ။ အချို့ စီးပွားရေးခက်ခဲမှုကြောင့်၊ အချို့ အပေါင်းအသင်းမှားမှုကြောင့်၊ မိန်းမသားဖြစ် သော်လည်း အရက်၊ ဘီယာစွဲလမ်းမှုကြောင့်၊ အချို့ အဓမ္မအကျင့်ခံကြရာမှ အားနည်းချက် ဖြစ်ပြီး ပေါက်သည့်နဖူး မထူးဇာတ်ခင်းခြင်း ကြောင့်၊ ပညာဗဟုသုတ နည်းပါးမှုများကြောင့် ပြည့်တန်ဆာဘဝ ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အချို့ ဤဘဝဤမျှသာဟု စိတ်နှလုံး ဒုန်းဒုန်းချထား ကြ၏။ အချို့လည်း ရောဂါတစ်ခု စွဲကပ်နေ၍ ချော်လဲရောထိုင် ပြည့်တန်ဆာဖြစ်ခဲ့ကြရ၏။ မည်သို့သောအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ် ပါစေ ကယ်တင်ရမည်၊ စည်းရုံး၍ လမ်းမှန် ရောက်အောင် ခေါ်ဆောင်ရပေမည်။
ပျော်ပါးရန်လာကြသောသူများထဲတွင် လည်း အလွှာမျိုးစုံ ပါဝင်၏။ ပညာမြင့်မားသူ၊ ပညာနိမ့်ပါးသူ၊ လူကြီးလူရွယ်များ၊ အိမ်ထောင် သည်များ၊ အရာရှိအရာထမ်းများ၊ နယ်ပယ် အသီးသီးကလူများ စုံလှ၏။
အချို့နေရာများတွင် ပွဲတော်အသွင် လူ မိုက်များ ဝန်းရံလှုပ်ရှားနေသော ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းများကြောင့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ များအဖြစ် ဖောက်ထွင်းမှုများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်၏။ အမျိုးကောင်း သားသမီးများကိုပင် ညပိုင်းတွင် လိုက်ဈေး ညှိတာ ရိသဲ့သောသရုပ်ပျက်မှုများ ရှိလာကြ ၏။ ယင်းတို့၏နံရံများက ထွက်ပေါ်လာသော စကားသံများက အနာဂတ်ယဉ်ကျေးမှုကို စိန် ခေါ်နေလေပြီ။
အိမ်ပွဲစား၊ မြေပွဲစား၊ ကားပွဲစားများ ရှိ သကဲ့သို့ ပြည့်တန်ဆာပွဲစားများလည်း ရှိလာ ပြီဖြစ်၏။ အဆင့်မြင့်ပြည့်တန်ဆာများကို ဆက် သွယ်ပေးမည့်သူများကို ပြည့်တန်ဆာပွဲစားဟု ခေါ်ဆိုရမည်ဖြစ်၏။ အနှိပ်ခံရန် တစ်နာရီ ခြောက်ထောင်၊ ကောင်မလေးနှင့် နှစ်ပါးသွားဖို့ ရာက ဈေးညှိအဆင်ပြေလျှင် ပြီးရောဆိုသည် များ ကြားနေရ၏။ အချို့ ပြည့်တန်ဆာပွဲစား ဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဆွဲကြိုးနှင့် ဟန်းချိန်း ကြီးနှင့် ဖုန်းဆိုလည်း နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ မြင့်ဖုန်းက ဟောတစ်လုံး ..ဟောတစ်လုံး၊ ကားအကောင်းစားကြီးစီး၍ဖြစ်၏။
အချို့က လမ်းပေါ်မှာပဲ ဈေးခေါ်ကြ၏။ ပျော်မလား၊ သွားမလားပေါ့။ မည်သည့်အရွယ်၊ မည်သည့်တည်းခိုခန်း၊ မည်သို့သောပုံသဏ္ဌာန်၊ ဖြူသည် မည်းသည် ညိုသည်က အစပေါ့။ ဈေးတည့်သွားလျှင် ဖုန်းလေးတစ်ချက် ကောက် ဆက်လိုက်၏။ ဟိုရောက်လျှင် ရယ်ဒီ၊ အချို့ အထည်ကြီးပျက်များ ပြောရမလား။ အိမ်မှာ နေရင်း ဖုန်းနံပါတ်ကို ပွဲစားအားပေးထား၏။ ဖောက်သည်ရှိလျှင် ဆက်လိုက်၊ သဘောကျ မည်၊ ကြိုက်ဈေးရမည်ဆိုလျှင် အငှားကားလေး နဲ့ ချိန်းထားရာဟိုတယ်ကို လာမည်ပေါ့။
အချို့နိုင်ငံများတွင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ကို ဥပဒေအတားအဆီး၊ လူမှုရေးအတားအဆီး များရှိ၍ ပြည့်တန်ဆာအခန်းကို ကောင်းသော လိင်ထွက်ပေါက်(Good sex Outlet)ဟု ဆိုပြန် တော့ မခက်ပေဘူးလား။
အချို့ယောက်ျားသားများ ဆန္ဒဖြေဖျောက် ရန် အချို့အိမ်ထောင်ရှိသော်လည်း အသစ် အဆန်းကြုံချင်၍ အချို့အိမ်ထောင်ဖက်က ကျန်းမာရေးမကောင်းသူဖြစ်၍ ဆက်ဆံရန် အဆင်မပြေသောကြောင့်၊ အချို့သာမန်မိန်းမ သားများဆီက မရနိုင်သောအပြုအစု၊ အတွေ့ အထိ အသစ်အဆန်းများရချင်၍၊ အချို့ အပေါင်း အသင်းများ အဆွယ်ကောင်း၍ ပျော်ပါးလို၍၊ မူးယစ်သောက်စား၍၊ ပြည့်တန်ဆာခန်းသို့ ရောက်လာကြ၏။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အန္တရာယ် ကင်းကြစေလို၏။
ဤကား အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်း ဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ပြည့်တန်ဆာ ဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းများကို မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီက ဦးဆောင် ရေးဆွဲထားကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ဖက် တည်းကိုသာ အားမကိုးဘဲ မိမိတို့ယောက်ျား သားများကလည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် တဏှာ ရာဂစိတ်ကို အသိသတိဖြင့် ထိန်းချည်နိုင်မည် ဆိုလျှင် ကော်မတီအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီရာရောက်ကြောင်း စေတနာဖြင့် စာရေးသူ လေ့လာမိသမျှ ဆက်နွှယ်ရေးသားထားခြင်း သာဖြစ်ပေ၏။ အမျိုးသမီးများဘက်ကလည်း ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရင်း ရိုးသားစွာ သက် မွေးဝမ်းကျောင်းပြုစေချင်ပါ၏။
အတော်ကြာ အသစ်ကလေး အသစ် ကလေးဆို၍ ပျော်ပါးလိုက်ပါက လူဖြစ်ရှုံး နေမည်စိုးသောကြောင့်ဟုဆိုရင်း သူငယ်ချင်း ကဗျာဆရာ ရွှေညာခိုင်စိုး ရေးသော ‘ခရီး သည်’ ကဗျာစုလေးကို သတိရလိုက်မိ၏။
– မုံရွာမှာ ခရေ
– မန္တလေးမှာ ခတ္တာ
– နေပြည်တော်မှာ ဝတ်မှုံ
– ရန်ကုန်မှာ ကသစ်
ကျွန်မ တကယ် အသစ်။
၆၆(ဃ)ဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် Myanmar Now အယ်ဒီတာချုပ်အမှု လိုပြသက်သေဖြစ်သူ အမှုစစ်ရဲအရာရှိကို စစ်ဆေ??
‘ပရိသတ်တွေရော ကျွန်မတို့ ငါးယောက်ရော ပျော်စရာကောင်းမယ့် ပွဲလေးတစ်ပွဲ ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်’ ??